China Tee & gbawara & Slotted breeki diski ụlọ ọrụ na suppliers | SANTA
Dị ka o kwesịrị ịdị, ụlọ ọrụ malitere ilele ụzọ ha ga-esi belata nchara nke rotors. Otu ụzọ bụ ime ka diski breeki na-egbu mgbu iji gbochie nchara.
Ọzọkwa maka ịrụ ọrụ dị elu, biko ga-amasị rotors ụdị agbapu na oghere.
Agba diski breeki, gbapụrụ na oghere
Kedu ihe kpatara diski gbapụrụ ma ọ bụ nke nwere oghere ji eme braking
Ọnụnọ nke oghere ma ọ bụ oghere na diski breeki bụ nkwa nke ijide n'aka nke ọma yana n'ezie usoro nkwụsịtụ na-anabata ma dị irè. Mmetụta a bụ n'ihi elu nke oghere ma ọ bụ oghere nke na-eme ka ọ dị mma, karịsịa na nhazi mbụ nke braking, na-arụ ọrụ ka mma site na ọnụ ọgụgụ dị elu nke esemokwu karịa nke diski ọkọlọtọ. ;
Uru ọzọ dị mkpa maka iji diski gbapụrụ agbapụ na nke nwere oghere bụ mmeghari ohuru nke ihe mgbakasị mpe mpe akwa. Oghere ndị ahụ na-akwụsịkwa mpempe mmiri nke nwere ike itinye n'elu breeki na mmiri ozuzo. N'ihi nke a, ọbụna n'ihe banyere okporo ụzọ mmiri mmiri, usoro ahụ na-anabata nke ọma site na ọrụ breeki mbụ. N'otu aka ahụ, oghere ndị na-eche ihu n'èzí, na-eme ka mgbasawanye dị irè nke mmiri ọ bụla nwere ike ịdị n'elu diski: ihe si na ya pụta bụ àgwà otu n'ime ọnọdụ ihu igwe ọ bụla.
Mgbe ha ruru okpomọkụ dị elu, ikuku ndị a na-emepụta site na combustion nke resins na-emepụta ihe na-emepụta esemokwu, nwere ike ime ka ihe na-eme ka ọ daa mbà, nke na-ebelata ọnụ ọgụgụ esemokwu n'etiti diski na pad, na-eme ka ọ ghara ịdị irè nke braking. Ọnụnọ nke oghere ma ọ bụ oghere n'elu braking na-enye ohere maka ịchụpụ gas ndị a ngwa ngwa, na-eweghachi ọnọdụ breeki kacha mma ngwa ngwa.
Aha ngwaahịa Disiki breeki agbagoro agba, gbachie na oghere
Aha ndị ọzọ rotor breeki agba, rotor breeki, gbapụrụ na oghere
Nke gara aga: Mpempe breeki ọla dị ala, arụrụ ọrụ breeki dị mma
Osote: Mpempe breeki nke ọkara ọla, arụmọrụ dị oke elu
Ngwaahịa na-ekpo ọkụ - map saịtị mpe mpe akwa breeki akpaaka, Pads breeki na-arụ ọrụ, Ụgbọ ala breeki, breeki drum volvo, Ụgbọala akpụkpọ ụkwụ breeki, diski breeki,